201704 CoolSports 2017 Freestyle Basketball And StreetDance Festival Myanmar
Come and Join Us ! Play Some Kool !
2017 CoolSports Freestyle Basketball And StreetDance Festival
Saturday, April 1 2017, at5PM - 8:30 PM
Pioneer Music Club
Oo yin lane, Yangon
[Google Map of Pioneer Music Club]
Ticket 2017 CoolSports Myanmar
FreeStyle Basketball Masters: Ben Chen, AK, Cloud Chi, DD
Music powered by Rap Singer - Pyi Thar / DJ - Boby FUnk.
နိုငျငံတကာတှငျခတျေစားနသေော FreeStyle Streetdance ကကှကျမြားကိုလလေ့ာနိုငျရနျ Pioneer Music Club သို့ အကဝါသနာရှငျ ညီအဈကိုမောငျနှမမြားကို ဖိတျချေါပါတယျ။ ယခု မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး လူငယျတျောတျော မြားမြား စိတျဝငျစားလကျြရှိသော FreeStyle Basketball ကကှကျမြားကိုလညျး အနီးကပျ ကွညျ့ရှုလလေ့ာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ လာရောကျ ခငျြသူမြားအနဖွေငျ့ Online မှ Register ပွု လုပျရုံမြှနှငျ့ ဝငျခှငျ့လကျမှတျမြားကို အခမဲ့ရရှိ နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ လာရောကျလိုသော ညီ အဈကိုမောငျနှမမြားအားလုံး ယခုပဲ QR Code လေးကို Scan ရိုကျပွီး ပှဲတျောနမှေ့ာ အတူတူ ဆုံလိုကျကွရအောငျနျော ... ။
(Zawgyi One code)
နိုင်ငံတကာတွင်ခေတ်စားနေသော FreeStyle Streetdance ကကွက်များကိုလေ့လာနိုင်ရန် Pioneer Music Club သို့ အကဝါသနာရှင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လူငယ်တော်တော် များများ စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသော FreeStyle Basketball ကကွက်များကိုလည်း အနီးကပ် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက် ချင်သူများအနေဖြင့် Online မှ Register ပြု လုပ်ရုံမျှနှင့် ဝင်ခွင့်လက်မှတ်များကို အခမဲ့ရရှိ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက်လိုသော ညီ အစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး ယခုပဲ QR Code လေးကို Scan ရိုက်ပြီး ပွဲတော်နေ့မှာ အတူတူ ဆုံလိုက်ကြရအောင်နော် ... ။
The 1st FREESTYLE PERFORMERS PARTY
If you love dancing and music, come to our FREESTYLE PERFORMERS PARTY. If you want to feel the heat among young people, come to this event. This year we have invited lots of famous international Freestyle football and basketball performers and street dancers to this party to show you how we HIP HOP this city! You will not only find all the champions from Canada, Taiwan, China & Myanmar, these performers are enchanting and psychedelic, but also you will get one drink for free and play lucky draw games in this party!
Please check “CoolSports” Facebook Fanpage to get more information!!!
And scan QR-Code to register as below and you will get ticket for FREE!!!
This one day party will be held at 6:00PM - 9:00PM on April 1. Do not miss out!!
visit CoolSports Myanmar Facebook Fans Page. ==> https://www.facebook.com/CoolSportsMyanmar/
Powered by KBOX Boombox 4.0 Bluetooth Speaker
Sponsored by KingCom - be Kool